Ngaba ndiyakubona uphendlo lwegama elingundoqo lama-Amazon usebenzisa i-software elula?
Akukho mfuneko yokutsho ukuba umhlaba we-intanethi yokukhangela i-intanethi ijikeleze ngokubanzi malunga nophando lwegama elingundoqo kunye nokukhetha okufanelekileyo. Kwaye kungakhathaliseki ukuba yiyiphi indawo kufuneka isebenze isicwangciso-magama esiyintloko-ingaba yinkqonkqo yokukhangela i-intanethi ngeenjini eziphambili (njenge-Google ngokwayo, i-Yahoo, iBing, njl. phezulu kweendawo ezithengwayo zokuthenga, njenge-Amazon okanye i-eBay. Ukwahlukana kuphela phakathi kokukhangela okusemgangathweni kwikhompyutha kunye nayiphi na i-ecommerce okanye ishishini lokuthumela ukuthungela ukuba olo phando lufanele lube lujoliswe ngakumbi kwi-niche kwaye lujoliswe kumqhudelwano. Kwaye ngaphantsi ndiza kukubonisa iindlela ezimbini ezilula zokufumana uphando oluphezulu lwe-Amazon ngegama elingundoqo. Ngoko, ukuba usebenzise ingqiqo enokubambisana nentsingiselo yakho, ndincoma ukuba uzame iqonga elithile elithile (uMhloli oyiNkcazelo yegama elingundoqo), okanye i-classics ephilayo enkonzweni yakho mahhala, njengoko ihlala ihlala.
Umhloli wegama elingundoqo uyiplani ekhethekileyo ye-intanethi engakunceda ukuba ufumanise uphendlo lwegama elingundoqo le-Amazon naluphi na uhlobo lomkhiqizo okanye uluhlu lwesigaba. Esi siqonga sinceda nangendlela yayo ekhethekileyo eyaziwa ngokuba nguKhangelo olusisigxina lwegama elingundoqo. Inokukuvumela ukuba usebenze ngokukhawuleza kwishedyuli yokukhangela ngokukhawuleza kwaye uhlale uhlawuleza kunye nawo onke amagama angundoqo asetshanje wakhwela phezulu kwi-Amazon yokusesha. Ingakumbi - Umhloli wegama eliphambili unamanye amanyathelo atshisayo kakhulu (okubizwa ngokuba yi-Tester Tester ne-Reverse ASIN), enokuyenza kakuhle ukuba ufuna ukuba uluhlu lweemveliso zakho lulungiswe kakuhle ukuze kufikeleleke ukutyhila okubanzi kunakho. Into embi kuphela malunga nale nqwawu yophando ngegama eliphambili kukuba ngelitshi, ayikho inkululeko yokufumaneka. Kuphela ityala lisele ukuba uthathe isigqibo sokuba ngaba uya kubhaliswa kwenyanga okanye uqhubeke ungena ngaphandle kwayo.
Njengoko ndithe ndatsho ekuqaleni, uphando lwegama elingundoqo olufakwe kwisikali luninzi olufanayo, ngokwenene lugxila - nokuba ulungelelanisa maphepha ekutshekweni kwe-Google yangaphambili, okanye ukusebenzela uluhlu lwemveliso ye-ecommerce okanye ukuthumela ibhizinisi lokuthumela. Ndiyathetha ukuba ngesizathu esithile isiCwangciso sethu seNgcaciso esingumgugu esidalwe yi-world giant search sichithwa kakhulu ekuthandeni, ngokukodwa kwiminyaka yamuva. Ngamaqela amaninzi ahlukeneyo e-ecommerce kunye nezixhobo ezihambelanayo ezijoliswe ngokukodwa kwiimfuno kunye neenjongo zabo, isakhelo sokuqala se-Google (a.k.a.Google AdWords) sigcine amandla akhe angaphambili. Ndiyathetha ukuba i-Keyword Planner isisitye esisodwa phakathi kweentlobo ezahlukeneyo ezahlukeneyo (kwaye zihlala zikhululekile!), Ezibandakanyiweyo kwi-AdWords ngokungagqibekanga. Kwaye kusebalulekanga nje kuphela njengesikhokelo esinamandla esinokukhangisa, kodwa ukufumana, umzekelo, uphando oluphezulu lwama-Amazon kunye namagama aphambili kunye nemigca efanelekileyo yomsila.
Emva koko, masijamelane nayo - izinto ezizungezile zihlala ziguqukayo. Kodwa akuthethi ukuba sonke simele sibheke kuphela kwii-toolkits ezitsha zetekisi, izixhobo zesoftware, okanye iisombululo ezisanda kutsalwa. Ewe, ngamanye amaxesha aphezulu, kodwa ngokuqinisekileyo, ndikholelwa ukuba i-Google Keyword Planner isasemdlalweni, ubuncinane ukuba loo nto ayiyiyo imfuneko kakhulu ukuhlala ihlaziywa kwiindawo eziphambili ezikhethiweyo ze-Amazon kunye negama elifanelekileyo.